so-called Rohingya – democracy for burma
Tag: so-called Rohingya
#BURMA #NLD #No #citizenship to #Bengalis
On May 22, 2015 By Burma Myanmar newsIn BENGALI, Burma, MYANMAR, NLDLeaveacomment
NLD denies news report saying it demands to give citizenship to Bengalis
The story of The Independent news agency reported NLD demanded government to give citizenship rights to Bengalis so-called Rohingyas
Opposition party National League for Democracy (NLD) denied that their party didn’t ask the government to give citizenship rights to Bengalis refugees adrift on the sea as reported in UK-based The Independent, said NLD’s spokesperson Nyan Win to the Daily Eleven on May 21.
The Independent newspaper featuredastory on May 19 titled “Burma’s opposition demands government gives citizenship to Rohingya refugees adrift on the Andaman Sea”.
Nyan Win said the paper asked his view about the Bengalis and he said about it in his own opinion. And he said he didn’t talk about the demand to give citizenship to Bengalis like the title of the story mentioned.
The Independent directly quoted what Nyan Win said in the report. In an interview with The Independent, U Nyan Win said: “The problem needs to be solved by the law. The law needs to be amended. After one or two generations [of residence] they should have the right to be citizens.”
He said, “It is right that I said those words but what I said is the government should amend the 1982 Citizenship Law into the conditions which everyone can accept.”
He continued that he didn’t demand the government to accept Bengalis who are drifted on the sea as citizens.
UN Human Rights Committee once urged Myanmar government to recognize Bengalis as citizens and Nyan Win then said he didn’t accept the issue.
“I can understand thatahuman being should be entitled to beacitizen in accord with law but I can’t accept the term “Rohingya”. The term “Rohingya” does not existed in the history of Myanmar. If they use Rohingya, I don’t accept,” said Nyan Win at that time.
Does Aung San Suu Kyi – notoriously reticent on the Rohingya issue – share her party’s spokesman’s views about their right to citizenship? “I don’t know,” he said, read the Independent’s story. Continue reading “#BURMA #NLD #No #citizenship to #Bengalis” →
!! #ဆရာဒေါက်တာလှိုင်မြင့်ရဲ့ #အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ #သုံးသပ်ချက်
On May 19, 2015 By Burma Myanmar newsIn BENGALI, Burma, MYANMAR, UNHCR / MalaysiaLeaveacomment
ဆရာဒေါက်တာလှိုင်မြင့်ရဲ့ အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ သုံးသပ်ချက်
ဘဂါင်္လီ လှေစီးဒုက္ခသည်တွေ အရေး ဖြေရှင်းမှုမှာ အစိုးရ၏ အားနည်းချက်များ။
စစ်ဗိုလ်တွေဟာ ကိုယ်ကျိုးရှာချင်လို့ အာဏာသိမ်းတယ်လို့ ပြောရင် ငြင်းချင်ကြမယ် ။ မခံနိုင်ကြဘူး။ ဘယ်ဗိုလ်ချုပ်မှ ကိုယ်ကျိုးမရှာထားဖူးတိုပြီး ငြင်းရဲသလဲ။ စိန်ခေါ်တာကို လက်ခံရဲသူရှိလား။
ပိုဆိုးတာက အဲဒီကိုယ်ကျိုးရှာတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်စီးနေတဲ့ လေယာဉ်ရဲ့ငွေနည်းနည်းလေးသာရပေမည့် ဝက်အူသေးသေးလေးကို ဖြုတ်ရောင်စားတဲ့သူတွေ ။ အဲဒီဝက်အူသေးသေးလေးက ဈေးသာ မရပေမည့် ပန်ကာကိုထိန်းထားတဲ့ဝက်အူလေးဖြစ်နေရင်တောင် ဖြုတ်ရောင်းတဲ့လူစားတွေ။
ဗိုလ်မျိုးညွှန့်ပါးစပ်ကတော့ တဖွဖွ။ ဒေါ်စုက အင်္ဂလိပ်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုထားလို့မြေမြိုလို့ လူမျိုးမပျောက်ဘူး..လူမျိုးမြိုမှ လူမျိုးပျောက်မယ် တဖွဖွ။ ပြီးသူတို့ ကိုယ်တိုင် ဒီဘင်္ဂါလီတွေကိုလာဘ် ငွေယူလက်ခံခဲ့လို့တနစ်တခြားပိုပိုများလာတယ်။
ကျောက်နီမော် မုဒိန်းလူသတ်မှုမှာ အခုဒေါ်စုကို နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းထဲ တွန်းပို့ချင်တော့ ဒေါ်စုက မြန်မာဖက်ကပါရင် ဘင်္ဂါလီဂျီဟတ်ကို ဖွင့်ပေးပြီး လာရှင်းခိုင်းမယ်။ ရိုဟင်ဂျာဖက်က ပါရင် နိုင်ငံရေးအရ ကိုယ်လည်ပင်းကိုယ်ကြိုးတပ်မိလျက်သား..DILEMMA ။ စစ်တုရင် စကားနဲ့ ဆို အပိုင်ခွချက်ဘဲ။ ဒေါ်စုက တစက်မှ-မဟတော့ ပြဿနာက အမှိုက်မီးကနေ ပြဿဒ်မီးစွဲတော့တာ။ ကိုယ့်ရှုးကိုယ်ပတ်။ ခုတော့ မရှင်းတတ်ကြ။ အရေးထဲ မာနက ကြီးကြီး ငါတို့ လောက်မသိမတတ်။
ဒေါ်စုကိုပြောတော့ အင်္ဂလိပ်လက်တံတဲ့။ အခုသူတို့ က အမေရိကန် ပွဲစားကို ပုံအပ်ရတယ်လို့။ လုပ်လိုက်ရင် S တလွှဲချည်းဘဲ ။ သမတလစာက တလ သိန်း ၅၀ ( ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ )။ သမတဘေးက ဝန်ကြိးတွေ( ၆ ဦး ) ရဲ့ လစာက တဦး၃၀ x ၆ = သိန်း၁၈၀ ။ ဒု-ဝံတွေ ၊ မပါသေး။။ အကြံပေးတွေငှားထားတာ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိ တဦးကို တလ ဒေါ်လာ ၈၀၀၀ ကနေ ၁၀၀၀၀- ။ သိန်း၁၀၀ ဝန်းကျင်။ သမတထက်တောင်ဈေးကြီးနေသေး။
ထမ်းပိုးထက် လက်ခကြီး ။
ကနေ့ဘင်္ဂါလီလှေစီးဒုက္ခသည်ပြဿနာပေါ်လာတယ်။ တဖက်က ဟိုလိုပြောလာလျင် ဒီလိုလှဲ့ ပြော။ မိုးကြိုးပစ်တာ ထန်းလက်နဲ့ ကာသလိုဖြစ်နေတယ်။ ထိထိရောက်ရောက် မတုန့် ပြန်နိုင်ဘူး။ သမိုင်းလဲ မကျွမ်း ၊ သိပ္ဗံလဲ မသိ ခက်ပါဘိ။ ယောတိ ယောရာ ယောင်ခြာခြာ။
ကျနော်လူတတ်ကြိးမဟုတ်ပေမည့် ဗိုလ်သိန်းစိန်ရဲ့လူတွေထက်တော့ ကိုယ်ကိုသာတယ်လို့ ယုံတယ် ။ သေခြာတာကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ မိန့် ခွန်းကို အငှားယူသုံးပြီး ..တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လောက်ချစ်သလဲ အချိန်မရွေးပြိုင်ရဲတယ် ။ လူထုက ဆုံးဖြတ်မယ်ဆို သူတို့ ထဲက သီဟသူရဘွဲ့ ရတဲလူလဲလာခဲ့ပြိုင်ရဲတယ် ။
ကျနော်စဉ်းစားတာလေးတွေ ချပြချင်ပါတယ် ။ လူအများပြောင်းရွှေ့ မှုကို နစ်ဖက်စဉ်းစားရပါတယ် ။ PUSH & PULL factors..လူကို တွန်းထုတ်မှု နင့် ဆွဲငင်မှု အကြောင်းတရား ၂ မျိုးနဲ့ ချိန်ထိုးပါမယ် ။ ကနေ့အာဖရိက လှေစီးတွေကိုလဲ သူတို့ ဒီလိုဘဲ ချင့်ချိန်ကြပါတယ် ။
( ၁ ) ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးနိုင်ငံ ။ တရားဝင်သန်းကောင်စာရင်း( နစ်၂၀ကျော်ခဲ့ ) စာရင်းက လူဦးရေသန်း၁၅၂ -သန်း ။ ခန့် မှန်းသူတွေက ၁၆၅ သန်း။ တိုင်းပြည်မှာ လူနေမရတဲ့ တောင်တန်းနဲ့ကျယ်ပြန်တဲ့ ဒီရေနွံတောဧရိယာသာထုတ်လိုက်လျင် လူနေထိုင်နိုင်တဲ့ ဧရိယာက သေးသေးလေးမှာ လူ သန်း၁၆၀ ပြွတ်သိပ်ကျပ်ညပ်နေတာက အဓိက PUSH ကအဓိကတွန်းအား ။
( ၂ ) အလုပ်အကိုင်းရှားပါးမှု ။ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှု နင့် အဓိက နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အမျိုးသမိးနစ်ဦး၏ တဦးအပေါ်တဦး မုန်းတီးမှုကြိးမားခြင်း ၊ ညစ်ပတ်တိုက်ခိုက်ပြီး နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြိးများကိုပါတိုက်ခိုက်လာသည့်အထိ လွန်ကဲလာမှုက ရင်းနီးမည့်အလုပ်များကိုကန်ထုတ်နေမှုကလည်း အဓိက တွန်းမောင်းကန်အားဖြစ်နေပြန်သည် ။ Continue reading “!! #ဆရာဒေါက်တာလှိုင်မြင့်ရဲ့ #အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ #သုံးသပ်ချက်” →
#Protest #UN #resolution #citizenship #Yangon #Myanmar #Burma #16/11.
On January 16, 2015 January 16, 2015 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
PROTEST RALLY CONDEMN UN URGING MYANMAR BURMA TO PROVIDE “FULL CITIZENSHIP ” TO ILLEGAL IMMIGRANTS fROM Bangladesh
On January 8, 2015 January 8, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma1 Comment
Yanghee Lee, the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, launched her tour of Myanmar by visiting Insein prison in Yangon today. PROTEST ARIPORT SITTWE 100 MONKS AND MORE THAN 300 VILLAGERS
A/69/488/Add.3 DR III
69th General Assembly of United Nations are
@Null and void!!!
PHOTOCR. ရခိုင်လူမှုကွန်ရက် – စစ်တွေ
1. There were no nomenclature of the Rohingya in the Myanmar ethnic groups throughout the successive ages of history at all. There also had one firm opinion remark as they were Bangalee trespassers which was proclaimed by the embassy of the England from Burma(Myanmar) in December 23rd 1975 expressed that “ Bangladesh and Burma. He admitted that there were upward ofamillion Bangalee trespassers in Arakan whom the Burmese had some right to eject”. There were no nomenclatures, terms and ethnics as Rohingyas at all.
2. Myanmar is an independent and sovereign state proclaimed by the United Nation. She also has historical significance which is in succession with her own valuable cultural heritages. There once wasaprominent world history that Myanmar honourable UN Secretary General U Thant himself solved and handled the world serious cases without prejudices, which were leading to impending third world war, appreciated by the world. That was an epic event ofaresponsible and accountable leader. Continue reading “#UN #Special #Rapporteur #PROTEST #tour of #Myanmar #Burma” →
!! “ROHINGYAS” #ISLAM #TERRORISTS #ARRESTED #NGO,S #UNIVERSITIES
On December 2, 2014 December 2, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Dhaka Metropolitan Police Deputy Commissioner Krishnapada Roy said they arrested the ‘Rohingya militants’ from Lalbagh’s Etimkhana Mor around 9:30pm Sunday.
The men arrested were identified as Nur Hossain aka Rafikul Islam, 26, Yasir Arafat, 22, and Omar Karim, 25.
They were caught with five detonators, two gel explosives and several bomb-making ingredients, said Additional Deputy Commissioner of Detective Branch, Saidur Rahman.
“They are Rohingya militants, They have links to Rohingya Soliditary Organisation (RSO), Arakan Rohingya Union (ARU) and Netherlands-based NGO Global Rohingya Center (GRC).”
Two suspected militants were killed at Burwan town on Oct2in explosions atahouse that had been turned intoabomb-making facility. India’s National Investigation Agency said the house was being used by militants belonging to the JMB,abanned extremist group from Bangladesh.
Sheikh Rahmatullah Sajid, said to be the head of JMB’s module in the town, was arrested in Kolkata. Detectives believe he is known as Masum in his home town at Narayanganj’s Farazikanda.
Another Rohingya man Khalid Mohammad had been arrested from Hyderabad in connection with the incident.
Sunday night at 0925 and 013 in the last 30-11 DMP and aparadhatathya category Lalbagh Police Station raided the orphanage crossing area3militants were arrested . Noor Hossain Mohammad Rafiqul Islam was arrested (6) , Yasser Arafat ( X ) and Omar Karim (5). Detanetara 05 of their custody , 02 bombs and 100 grams of white and orange T- gel explosive material was recovered . The RS, jiarasi and earaiu ‘s-
After the blast of transnational terrorist networks seeking Burdwan khagaraghare Bangladesh and India on the basis of exchange of information between intelligence agencies in different parts of Dhaka Metropolitan Police continued . Subsequently were arrested in the raid .
Police said that the preliminary interrogation , Burdwan stateless citizen Khaled Mohammad alias Abdul nurake explosion involving their ideological guru thinks . The RSO,GRC,ARO ROHINGA UNITS VOICE FOR HUMAN RIGHTS
Active members and all citizens of Myanmar . They are illegal in Bangladesh anuprebesa attended madrassas behind several different radical militant organizations has been conducted . Chittagong , Cox’s Bazar and the hilly areas of different NGOs , orphanages , and the University has been conducted behind the militant organizations . Lalbagh police against those arrested under anti-terror laws and explosives.
Today atapress briefing at the Media Centre of DMP DMP and aparadhatathya deputy commissioner of police in terms of Krishna Roy said. DMP Media Centre at the deputy commissioner Rahman were present .
Deputy Police Commissioner Ray ppm terms dibira Krishna ‘s guidance , Additional Deputy Police Commissioner Mohamed Hussein chanoyara ppm ( bars ) of the unit under the supervision of Assistant Police Commissioner Mohammed Rahmat Ullah Chowdhury disapojala bomb led.
CR. U Htay Tint
#BURMA #BUDDHISTS #PATRIOTS #PROTEST #AGAINST #UN #BAN-KIMOON #ROHINGYA ” #TODAY
On November 29, 2014 November 30, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Photo ကြည်နူး Ko Hla Moe 29/11/2011
ဘင်္ဂါလီမွန်းကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပွဲ ( ၂၉-၁၁-၂၀၁၄ )
#ဘန်ကီမွန်း ကန့်ကွက်ပွဲ #UN #ဘင်္ဂါလီမွန်းကို #ကန့်ကွက် #ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပွဲ ( ၂၉-၁၁-၂၀၁၄ )
On November 29, 2014 November 29, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ဘင်္ဂါလီမွန်းကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပွဲ ( ၂၉-၁၁-၂၀၁၄ ) CR. Ko Hla Moe
ရိုဟင်ဂျာ လို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲ ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းအား ကန့်ကွက်တဲ့ အနေနဲ့ လူအင်အား ၅၀၀ ၀န်းကျင်နဲ့ လမ်းလျောက် ဆန္ဒပြပွဲကို ယနေ့နေလည်း ၁း၃၀ က ဗဟန်းမြို့နယ် ကြေးသွန်း ဘုရားရှေ့ မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Author/ Photo ကြည်နူး
#MYANMAR #BURMA #ROHINGYA” #RSO #TERRORIST #ARRESTED #Hyderabad
On November 19, 2014 November 20, 2014 By Burma Myanmar newsIn Asean, BurmaLeaveacomment
The National Investigation Agency (NIA) on Monday arrested an explosives expert in Hyderabad, who is believed to beaMyanmar national, in connection with its probe into the October2Burdwan blast and Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB) terror conspiracy.
According to the NIA, 28-year-old Khaleed alias Khalid Mohammed isatrained IED explosive expert and has links with Bangladesh-based terrorist groups. Khalid, who is believed to hail from Myanmar’s Rakhine state, is reportedly associated with the Rohingya Solidarity Organisation — set up in the early 1980s to fight for citizenship and rights for the minority Rohingya Muslims in Myanmar.
He is alleged to be involved inrunning terror camps in bordering areas of Bangladesh and Myanmar.
Officials said incriminating videos of training material, literature relating to poisons, IED making, bomb making, explosives and jihad were found from his possession.
The seized documents also allegedly include jihadi literature pertaining to the Islamic State.
NIA sources said that Khalid has admitted to having undergone terror training conducted by the Tehreek-e-Azadi-Arakan with trainers from Tehreek-e-Taliban-Pakistan. He was residing in Hyderabad from October 2012 and managed to procure fake identity documents, the NIA alleged, adding that he did not have valid travel documents.
!!! #Letter to #Ban #Ki-Moon from #Dr #Aye #Chan #Arakan #scholar #Kanda #University of International Studies
On November 18, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Open letter to Ban Ki Moon from Dr Aye Chan of Arakan scholar from Kanda University of International Studies
!!! #MOI #ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ထံသို့ ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့
On November 13, 2014 November 14, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ထံသို့ ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့
နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၃
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းသည် နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက် ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိုဌာန၌ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးမောင်မောင်အုန်းက ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းထံသို့ ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ပေးစာတစ်စောင် ပေးပို့ထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါပေးစာတွင် “သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် စကားလုံးကို သုံးစွဲခဲ့ခြင်းအတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ လူနည်းစုများ၏ အခွင့်အရေးအတွက် အလေးထားမှုကို နားလည်နုိုင်သော်လည်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြင့်မားသည့်ရာထူးတာဝန်ကြောင့် အဆိုပါ စကားလုံးကို သုံးစွဲမှုသည် နှစ်ဘက်အသိုက်အ၀န်း၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနုိုင်ရန် လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်နေရသည့် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းများအပေါ် ထိခုိုက်စေကြောင်း။
ထိုစကားလုံးကို အသုံးပြုခဲ့သည့်အတွက် ရခုိုင်တုိုင်းရင်းသားများနှင့် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများအကြား ကွဲပြားမှုများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေသည်သာမက မြန်မာပြည်သူများနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုက်အ၀န်းကြားတွင်လည်း နားလည်မှုလွဲမှားစေနုိုင်ကြောင်း။
နုိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများက ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် စကားလုံးကို အသုံးပြုရန် အဆက်မပြတ် ကြိုးစားခြင်းသည် ရခုိုင်ပြည်နယ်အတွက်လိုအပ်သော အကူအညီများ ကိုပေးအပ်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့် MSF ကဲ့သို့သော နုိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ဒေသခံများ၏ သံသယရှိမှုကို ပိုမို ကြီးမားစေမည်ဖြစ်ကြောင်း။
မိမိတို့အနေဖြင့် အသိုက်အ၀န်းနှစ်ခုလုံး၏ အခွင့်အရေးနှင့် လိုအပ်ချက်များကုို ဖြည့်ဆည်းပေးနုိုင်ရေးကိုသာဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်ပြီး နှစ်ဖက်အကြား ခွဲခြား ခြားနားမှုကို တိုးပွားစေမည့် လုပ်ရပ်များအား ရှောင်ရှားသင့်ကြောင်း။
မိမိ ရခုိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကို စတင်ထမ်းဆောင်ချိန်မှစ၍ အသိုက် အ၀န်းနှစ်ခုအကြား အပြန်အလှန်နားလည်မှု တည်ဆောက်နုိုင်ရန်အတွက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သကဲ့သို့ ကုလသမဂ္ဂနှင့် နုိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ဒေသခံရခုိုင် တုိုင်းရင်းသားများက ယုံကြည်မှုရှိလာစေရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း။
ထိုအခြေအနေတွင် အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ပြောကြားချက်သည် မိမိတို့ရရှိထား သည့် အောင်မြင်မှုများကို ပျက်ပြားစေပြီး ဒေသခံများ၏ ခံစားချက်များအပေါ်လည်း အကျိုး သက်ရောက်သွားမည်ကို စိုးရိမ်မိကြောင်း” စသည်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။
■ ဘန်ကီမွန်းပြောတဲ့ ပညတ်လေးတစ်ခု ■
Q: I just wanted to follow up on the previous question. The United Nations and the international community accept “Rohingya”. Here in Myanmar, most of us know as “Bengali”. So their name is one of the problems of the conflict. And some politicians suggest to haveaDNA test, whether Rohingya or Bengali, which is scientific. What’s your opinion on this?
SG: I think I have answered your question already. I know that the Government is addressing them as “Bengalis” and people in Rakhine, they call themselves “Rohingya”. The United Nations has been using “Rohingya”, based on the continuing principle to recognize the rights of minority people. I hope that this should not create any additional problems. I don’t think this isanecessary one. And I am urging the Myanmar Government to make accelerated process to grant citizenship to all those who are eligible, according to their national laws.
[ပြောကြားချက် အပြည့်အစုံ : http://www.un.org/sg/offthecuff/index.asp?nid=3723%5D
ဒါကတော့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဖြေကြားသွားတဲ့ အဖြေစကား ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ လို့ ခေါ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က လူတွေကို ဘင်္ဂါလီ ဆိုပြီး ခေါ်ဝေါ်ပြီး ဖြေရှင်းနေတယ် လို့ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက ပြောပါတယ်။ နောက် ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ လူနည်းစုတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို အသိအမှတ်ပြုရမယ့် မူအရ ဒီနာမည်ကို ဆက်လက်ပြီး ခေါ်တွင်နေရတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ (ဒါဟာလည်း ပြောရမယ် ဆိုရင် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ ဆိုပြီး ပြဌာန်းထားတာ မရှိပါဘူး။ လေးစားမှုကို ပြသတဲ့အနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မဖြစ်မနေ ခေါ်ရမယ် ဆိုပြီး ပြဌာန်းထားတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။)
ဒီနာမည် ပညတ်ချက်လေးတစ်ခုကြောင့် နောက်ထပ်ပြဿနာတွေ မဖန်တီးသင့်ဘူး၊ ဒီအမည်နာမကလည်း သိပ်ပြီး အရေးမကြီးပါဘူး။ အဓိကအချက်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်း ဥပဒေတွေနဲ့အညီ ရသင့်ရထိုက်တဲ့သူအားလုံးကို နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့ မြန်မယအစိုးရကို တိုက်တွန်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ဆိုပြီး မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ဘန်ကီမွန်းရဲ့ ပြောကြားချက်ကြောင့် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ နောက် အလှူရှင်နိုင်ငံတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံ ဘဏ္ဍာငွေတွေနဲ့ ပရောဂျက်တွေလည်ပတ်နေရတဲ့ အခြေအနေကိုလည်း ချင့်တွက်မိပါတယ်။
နံပတ်(၁)အချက်က ဒီ ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတဲ့ ပညတ်တစ်ခုရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေက အများ ကြီး ရှိနေပါတယ်။ အမည်နာမကို အကြောင်းပြုလို့ ရေရှည်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေ အများကြီးပါ။ နောင်လာမယ့် မျိုးဆက်သစ်တွေလက်ထက် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အခြေအနေတွေကိုလည်း ကြိုတင် မျှော်တွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပညတ်ချက်ဟာ ကြီးမားတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကြီးတစ်ရပ် ဖြစ်နေစေတယ် ဆိုတာကိုလည်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။
[ဒီအမည်နာမဟာ ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရလက်ထက်က စတင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်မှာ Promote လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ။ ဒီကနေ့မှာလည်း သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ဘက် စစ်မျက်နှာဖွင့်ဖို့ ဆိုပြီး ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်နဲ့ မြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့ကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် လူ့အခွင့် အရေးတိုက်ပွဲတွေနဲ့ ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီလို တက်ကြွလှုပ်ရှား နိုင်ငံရေးသမားတွေ ၀ိုင်းဝန်းပြီး တက်ညီလက်ညီ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးလိုက်တဲ့အနေအထားက ဒီကနေ့ ဘယ်လိုမှ ပြန်ပြီး မရှင်းနိုင်တော့တဲ့ စိန်ခေါ်မှုကြီး၊ ဘယ်လိုမှ ပြန်ပြီး မချေပနိုင်တဲ့ PR ပါဝါကြီး ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ အမှန်တရားပါ။ ဒီပညတ် ပရိုမိုးရှင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေ အခုလည်း ရှိနေကြတုန်းပါပဲ။ ကိုယ့်ပြန်ချောက်နေတဲ့ ကိုယ်မွေးတဲ့မျောက်ကို ဘယ်သူမှ မနိုင်ကြတော့ပါဘူး။]
နံပတ်(၂)အချက်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေနဲ့အညီ according to their national laws ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ။ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး နိုင်ငံတော်မှ ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေနဲ့ အညီ ဖြစ်ရမယ် ဆိုတာကို မစ္စတာဘန်ကီမွန်းကောင်းကောင်း သဘောပေါက်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဥပဒေတွေမှာ တိုင်းရင်းသား ဆိုတဲ့ မျိုးနွယ်စုကို ဘယ်လို သတ်မှတ်ထားတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားဝင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်း (၁၃၀)ကျော်မှ ဒီနာမည် မပါဘူး ဆိုတာတွေကိုတော့ အတွင်းကျကျ လေ့လာထားမှု အားနည်းတယ်၊ သို့တည်းမဟုတ် သတိလက်လွှတ်ဖြစ်သွားတယ် လို့ပဲ တွက်မိပါတယ်။
နံပတ်(၃)အချက်က ဒီနာမည် အသုံးပြုလို့လည်း ဘာပြဿနာမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး လို့ တွက်ထားတဲ့ ပုံ ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားသွားပါပြီ။ ယခုနောက်ပိုင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ခွဲထွက်ခွင့်တွေ၊ သီးခြားနိုင်ငံ ထူထောင်ခွင့်တွေ ပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခြေအနေတွေက ဒီပညတ်ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်နိုင်မှုကို ပြသနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီလိုမျိုး ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာက တည်ငြိမ်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ အခြေအနေကို တစ်စုံတစ်ရာသော သက်ရောက်မှု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခတောကနေ တဖြည်းဖြည်းချင်း အေး ချမ်းစ ပြုလာတဲ့အချိန်မှာ ဒါတွေက မမျှော်လင့်တဲ့ အနေအထားကို ဖန်တီးစေနိုင်ပါတယ်။
နံပတ်(၄)အချက်က ရခိုင်ပြည်နယ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ရေးဆွဲထားတဲ့ Action Plan အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ပေါ်လာအောင် ကမ္ဘာ့အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ ပေါင်းကူးပေးဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ကယ်တမ်းမှာ အီဘိုလာတိုက်ဖျက်ရေး၊ IS နဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ဖျက်ရေး၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖျက်ရေး အစရှိတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ ထိရောက်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိဖို့ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ လုပ်ရမှာ အများကြီးပါပဲ။ မလုပ်နိုင်ရခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာလည်း အလှူရှင်တွေရဲ့ လိုလားချက်၊ အာဂျင်ဒါတွေအပါအ၀င် အကြောင်းရင်း များစွာ ရှိနေပါတယ်။ အလားတူပါပဲ ရခိုင်ပြည်နယ် အေးချမ်းတည်ငြိမ်ဖို့ အမြန်ဆုံးလိုအပ်နေတဲ့ ပြန်လည်ထူထောင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ နိုင်ငံတကာက အားတက်သရော ၀ိုင်းပြီး ပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ် ဆိုရင် မွန်းကြပ်နေတဲ့ ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ပွင့်လင်းလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် National Agenda အရ ရေးဆွဲထားတဲ့ Action Plan နဲ့ အညီ ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်။
နံပတ်(၅)အချက်ကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ အထိုက်အလျောက် တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင် ကြိုးစား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရရော ပြည်နယ်အစိုးရပါ အလေးထား ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက် ဒီကနေ့ တည်ငြိမ်မှုကို ပြန်လည် ရရှိလာနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း မြန်မာနိုင်ငံက “ဥပဒေနဲ့အညီ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်” ကို ငြင်းပယ်နေတာ မဟုတ်ဘဲ စီစစ်ပြီး ရသင့်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေ “ဥပဒေနဲ့အညီ” အမြန်ဆုံး ရရှိအောင် ကြိုးစားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သဟဇာတ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ရောက်ဖို့ အချိန်ယူရမှာပါ။ နိုင်ငံတကာရဲ့ ၀ိုင်းဝန်း ကူညီမှုတွေဟာလည်း ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးအတွက် အပြုသဘောဆောင်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ပြဿနာရဲ့ ဇစ်မြစ်ဟာ ဘာလဲ၊ ပြဿမာရဲ့ ဖြေရှင်းချက်က ဘာလဲ အတွင်းကျကျ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာမှု ပြုကြဖို့ လိုပါတယ်။
သို့မဟုတ်ရင်တော့ ဆေးအတွက်လေးရမယ့် အဖြစ်ကြောင့် ပဋိပက္ခထောင်ချောက်ထဲ ပြန်ရောက် သွားနိုင်ပါတယ်။ ထိလွယ် ရှလွယ် အနေအထားကို လိမ္မာပါးနပ်စွာ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနေအထားကို စာနာနားလည်ဖို့ အရေးကြီးပါကြောင်း။ Hmuu Zaw
Coral Arakan News 14/11/2014
အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမား နှင့် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းတို့က “ရိုဟင်ဂျာ” ဟု သုံးနှုန်းပြောဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
နေ့စွဲ။ ၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄
၁။ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဘင်္ဂါလီများနှင့် ပတ်သက်၍ ‘ရိုဟင်ဂျာ’ ဟု ဆက်လက်ခေါ်ဝေါ်မည် ဟု လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေအတိုင်း သူတို့ကို လက်ခံပေးသင့်သည် ဟု လည်းကောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ နှင့် နိုင်ငံတကာ အပါအ၀င် အများစုက ဘင်္ဂါလီ ဆိုသည်ထက် ရိုဟင်ဂျာ ဟုပဲ သိကြသည်၊ ထို့ကြောင့် ကုလသမဂ္ဂ လူနည်းစု အခွင့်အရေး စံနှုန်းများအရ ရိုဟင်ဂျာ ဟု သုံးနှုန်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း – ပြောဆိုချက်များမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးကြီးသော ပြည်တွင်းရေးကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း စွက်ဖက် ချိုးဖောက် စော်ကားလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ရှုမြင်သဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်သည်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရိုဟင်ဂျာ မရှိ ဟု သမ္မတ ဥိးသိန်းစိန် ကိုယ်တိုင် တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို လုံးဝအလေးမထားပဲ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက ‘ရိုဟင်ဂျာ’ ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲ ပြောဆိုခြင်းမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အစ္စလမ္မစ်ကမ္ဘာနှင့် ပတ်သက်၍ တင်းမာလာခဲ့မှုအားလုံးအတွက် သင်ပုန်းချေ မျက်နှာပန်းလှစေရန် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဘင်္ဂါလီများအရေးကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း အသုံးချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို အင်အားသုံးဝင်ရောက်စွက်ဖက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ရှုမြင်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချကန့်ကွက်သည်။
၃။ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် နှင့် အမေရိကန် သမ္မတတို့၏ ‘ရိုဟင်ဂျာ’ ဟု သုံးနှုန်းပြောဆိုမှုများသည် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းလုံခြုံမှုများကို ပျက်ပြားအောင် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ချက်များဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ရှုမြင်သည်။
၄။ ရခိုင်ပြည်နယ်၌ တရားဝင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်မည့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ ဟု သုံးနှုန်းပါက နိုင်ငံတော်အစိုးရက ယင်းအဖွဲ့အစည်းများကို မည်သည့်ကိစ္စနှင့်မျှ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုရန် အလေးအနက် တောင်းဆိုသည်။